Imikhuba Emisha Engcono Kakhulu ye-SEO
NgoMsombuluko, Januwari 24, 2011 NgoLwesihlanu, Mashi 1, 2013 Douglas Karr
Ungahle ungakhathazeki ngokuthi ingabe izithameli zakho ziseMhlabeni okwamanje, kepha kungaba yinto ongafuna ukuyibukisisa. Ukukhula kwamazwe omhlaba kuwebhu kuyakhuphuka futhi kungaba ngumthombo omuhle kakhulu wenkampani yakho ukwandisa ibhizinisi layo. Amaklayenti ethu amathathu ayamaketha umhlaba wonke futhi besilokhu sisebenzela ukuthola izindlela ezihamba phambili zezinjini zokucinga. Nakhu okunye okutholakele:
gShiftLabs iyithuluzi lokuqapha i-SEO ngaphakathi nakwamanye amazwe.
Esimweni esihle, ukuze ubeke kahle ezweni elithile kufanele ube nama-ccTLD akhombisa izwe (.co.uk, .fr, .de, njll.) Aphethwe ezweni lomdabu. Uma lokho kungeyona inketho, sebenzisa izizinda ezingaphansi zolimi ngalunye, njenge-se.domain.com, de.domain.com njll.
Setha ama-akhawunti amaningi wamathuluzi we-Webmaster we-ccTLD noma isizinda ngasinye.
Qinisekisa ukukhombisa ulimi esigabeni.
Heha izixhumanisi ezivela kulelo zwe elithile.
Iseluleko seGoogle ku ukubamba ngaphakathi ezweni. I-DNS yangaphandle ingasiza uma ungakwazi ukubamba amazwe omhlaba.
Uma unehhovisi langaphandle, qiniseka ukugqamisa lelo hhovisi kusayithi elisebenzayo.
Ungathembeli ekuhumusheni okuzenzakalelayo. Uma ufisa ngempela ukufinyelela izithameli zomhlaba wonke, qasha amazwi aphesheya ukuhumusha okuqukethwe kwakho.
Tags: Ukukhangisa OkuqukethweInternationalukusesha kwamazwe omhlabaseo yaphesheyaukusebenzisa ngokugcwele injini
Hlanganisa i-WordPress ne-Blog Talk Radio